Riyaha xoolaha | December 2019
Riyaha ayaa degay degaannada dhaqaalaha muddo dheer. Xayawaanadaan waxaa lagu qiimeeyaa caanahooda, maadaama qof kastaa uusan fursad u helin inuu iibsado lana ilaaliyo lo'da, laakiin riyuhu wuu yaraanayaa oo uma baahna meel bannaan. Laakiin, sida lo'da, riyaha waxay ku yimaadaan jihooyin kala duwan: caanaha, hilibka, dhogorta iyo isku dhafan.
Ariga Alpine ee jilicsan
Caleenta ariga Alpine waa mid aad u gaboobay. Waxaa lagu soo noqdey ismaamul goboleedka Switzerland. Muddo dheer, riyahaasi waxay ku noolayeen oo kaliya daaqsinta alpine (tani waa halka ay ka timaaddo magaca magaciisa). Dhowrkii sanadood ee qarnigii labaatanaad, tarankan ayaa ku faafay dhulka Talyaaniga, Faransiiska iyo Mareykanka, halkaas oo, dhab ahaantii, waxay heshay sumcadeeda sare.
Lamancha - jilibka riyaha caanaha
Bilowgii qarnigii labaatanaad, laga soo bilaabo gobolka La Mancha - Spain, riyaha yar-yar ayaa la keenay Mexico. Horeba 1930, waxay ku noolaayeen Mareykanka, Oregon. Sannadaha soo socda, tarbiyeyaashu waxay bilaabeen shaqo iyada oo ujeedadu tahay in la keeno caanaha cusub. Inta lagu jiro isgoyska riyaha yar-yar ee lala yeeshay Swiss, Nubians iyo noocyo kale, saynisyahannadu waxay heleen noocyo cusub oo cusub, oo loo yaqaan La Mancha.
Riyaha Nubian waxay soo saari karaan ilaa tan caano ah sannadkii, sidaas darteed ilbaxnimadani waa mid aad u qiimeeya ariga riyaha. Xitaa caanaha qibrada leh way sii hayn karaan. Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado sifooyinka dayactirka iyo nafaqada xayawaanka. Aynu si fiican u baranno ilamaha dhow. Taariikhda asal ahaan Caanahan ayaa waxaa lagu dhaliyey Ingiriisi, oo ka yimid magaca rasmiga ah - riyaha Anglo-Nubian.
Wakiilka ugu qiimaha badan ee riyaha ah ee caanaha sarreeya waa Swiss Zaanen, oo ah goobta uu ku yaal magaalada Zaanen, oo ku yaal Alps. Xayawaanku way ka duwan tahay riyaha kale iyada oo waxtarkeedu sarreeyo, bacriminta wanaagsan iyo u-habboonaanta xaaladaha cimilada adag.
Noocyada ugu fiican ee riyaha caanaha: siyaabaha loo daryeelo iyo dayactirka
Maanta, taranka xoolaha ee riwaayadaha guryuhu maaha wax caan ah markii hore. Iyadoo soo ifbaxday jiilalka cusub ee casriga ah ee loo isticmaalo ujeedooyin qaas ah, helitaanka caanaha, hilibka, dhogorta, iyo tixgelinta xajmiga yar ee xayawaanka, xitaa bilowga beeraha ariga, ka dib sharciyada fudud ee haynta, waxay heli doonaan caanaha naaska leh ee caanaha leh, caanaha raaxada leh.
Riyaha yar yar ee Cameroon: dayactirka iyo daryeelka guriga
Xayawaanka saafiga ah ma aha oo kaliya dadka deggan Zoos. Beeraleydu waxay leeyihiin muddo dheer oo si guul leh u daadiyaan noocyada noocyada xoolaha ujeedooyin kala duwan: sida xayawaan, dalxiiska beeraha, iwm. Dib-u-eegidgan, waxaanu diiradda saari doonaa riyaha camiriiska iyo dabeecadooda. Xogta Guud Compact Riyaha Cameroon ayaa noqday kuwo baahsan dunida oo dhan labadii sano ee la soo dhaafay.